Previous Article Naijiria Emerie Tanzania na Mgbá Dike
Dịka iko mba Afrịka, AFCON, na-abịa nso, Naijiria bụ ndị ga-agba Guinea, Madagascar na Burundi n'otu B na Asọmpi AFCON nke afọ puku abụọ na iri na iteghete.
Mmemme iji mata ndị ga-agba ibe ha n'Iko Afrịka, agba nke iri atọ na abụọ ya, bụ nke were ọnọdụ ụbọchị Fụraịdee, n'isi ala Ijipt bụ Cairo
Asọmpi Afrịka a bụ ga-ewere ọnọdụ na amaegwuregwu isii: Amaegwuregwu dị na Kayịro, Amaegwuregwu Borg El-Arab dị na Alexandria, Amaegwuregwu Suez, Amaegwuregwu Nchekwa Ikuku, Amaegwuregwu Ismaila na Amaegwuregwu Al Salam dị na Ijipt site n'ụbọchị iri abụọ na otu nke ọnwa Jun were rue abalị iri na iteghete n'ike ọnwa Julaị.
Ijipt ga-agbapụ bọọlụ nke mbụ na asọmpi ahụ oge ha na ndị mba Zimbabwe ga-ama mbe na-abọ nke bụ oké n'ụbọchị iri abụọ na otu, n'ọnwa Jun. Asọmpi Iko Mba Afrịka a ga-abịazi n'isi njedebe na abalị iri na iteghete nke ọnwa Julaị.
Òtù F, n'iko ahụ mba iri abụọ na anọ na-azọ, jikọrọ mba abụọ bụ ndị nke abụọ na ndị nke atọ na ndị kachasị were mee ofuma kamgbe iko ahụ bidoro. Cameroon, bụ ndị burula ya bụ iko ugboro ise ma bụrụkwa ndị kara ibu ya bụ Asọmpi Iko Afrịka, na ndị ogbo ha na Ghana, bụ ndị burula ya bụ iko ugboro anọ ga-achịpụ ya. Benin na Guinea-Bissau bụ ndị mezuru otu ahụ.
Mba atọ burula iko ahụ ugboro atọ nke gụnyere Morocco kpụ ọkụ n'ọnụ, Ivory Coast na South Afrịka ga-ama onye bụ isi, tinyere Namibia.
Senegal, Algeria na Kenya na Tanzania si ọwụwa anyanwụ Afrịka bụ ndị nọ n'otu C.